Khayre iyo Madaxweeynaha Sudan oo ku kulmay Adisababa | Jubbaland Media Online
Khayre iyo Madaxweeynaha Sudan oo ku kulmay Adisababa
Posted on June 14, 2017 in Feat, Wararka // 0 Comments
Raysul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo dalka Itoobiya kaga qeybgalayay shir degdegga ah oo ay isugu yimadeen dalalka xubnaha ka ah IGAD oo looga hadlayo xiisadaha ka aloosan Koonfurta Sudan ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweeynaha Sudan Cumar Xasan Al-bashiir.
Kulanka oo ahaa mid labada dalka ay uga hadlayeen xoojinta iskaashiga u dhexeeya labada dal ayaa intii uu socday waxa uu raysul wasaaraha dalka uga mahadceliyay dowladda Sudan garab istaaga iyo taageerada ay siisay Soomaaliya.
Waxa uu sheegay in Soomaaliya ay haatan ka jirto dowlad ku timid rabitaanka shacabka, ayna ku howlan tahay dib usoo noolaynta xiriirkii iyo calaaqaadkii kala dhexeyn jiray dowladaha caalamka.
Dowladda Sudan ayaa Soomaaliya ka taageerta dhanka waxbarashada, ayadoo sanad walba ay dowladdaasi deeq waxbarasho siiso ardey Soomaaliyeed oo ka qalinjabiyay dugsiyada sare ee dalka.
Madaxweeynaha Sudan Cumar Xasan Al-bashiir ayaa dhankiisa sheegay in Soomaaliya iyo Sudan ay yihiin laba dal oo walaalo ah oo aan sina u kala maarmin, isagoo ballan qaaday in ay xoojin doonaan xiriirkii iyo wada shaqeyntii kala dhexeeysay dowladda Soomaaliya.